PTFE Yakarongedzwa Fekitori - China PTFE Yakarongedzwa Vagadziri, Vatengesi
PTFE Yakarongedzwa Fittings / Pipe
PTFE yakakomberedzwa pombi uye zvigadzirwa zvinopesana nehurosi, izere vharuvhu uye yakanyanya kumanikidza panguva yekukanganisa mvura yekubata. Mapaipi akarongedzwa uye zvekuisira zvinowanzo shandiswa pakubata kwakanyanya kwemvura pane tembiricha yakakwira. Zvikwepa uye zvekukomberedza zvakaiswa mukati nePTFE uchishandisa yakanyanya kugadziriswa maitiro zvichienderana nechimiro uye chiyero chezvigadzirwa. .
Polymer PTFE Yakarongedzwa Tube / Pipe / Hose, Tsvuku
Polymer PTFE Yakarongedzwa Tube yakanyanya viscosity muiyo gel mamiriro (haina kunyungudika zvechokwadi) inodzivirira kuti isagadziriswe zvakajairika mu extruders kana jekiseni kuumbwa. PTFE Tubing saka yakaoma kuumbwa kana extruded mune hydraulic extruders ne (namatidza extrusion) kana pasina (ram extrusion) mafuta. Namatira extrusion yePTFE inoburitsa inochinja tubing. Nekudaro, inoitika mune batch maitiro uye nekudaro marefu marefu anoenderera akaganhurirwa kune saizi batch, kusiyana neyakaomeswa-anogadziriswa fluoropolymers FEP, PF ...
Polymer PTFE Yakarongedzwa Tube / Pipe / Hose, Green
Polymer PTFE Yakarongedzwa Tube / Pipe / Hose, Bhuruu
1/2 Inch PTFE Yakagadziriswa Tubing / Hose Nhema
Iyi PTFE Tubing inoendesa mashandiro epamusoro kana zvasvika pakuchengeta tambo munzvimbo dzakaomarara. Kupisa kwakanyanya, hasha, hunyoro, uye makemikari hazvifanane. Sarudza pakati peyakajairwa kumhanya kwakatwasuka uye nekuwedzera kuchinjika kune yakaoma nzira. Iyi tubing inotaridzika zvakanyanya kukura pasi pehodhi yemota yako yepamusoro yekuita, asi tambo dzako dzinochida chero kupi. Kukosha Kwezvivakwa Simba redzimvura Simba 14V pamamirita Anoshanda Tembiricha -454 ° kusvika 500 ° F [-270 ° kusvika 260 ° C] Inogumira Oxyg ...
PTFE Polymer Waya yekushandisa tembiricha yakakwira ine mukana wakanaka wekuchinja. Kuti ushandise panodiwa kubrasion. Mafomu: avhiyesheni, vezvokutengeserana, Mujaho.